टिभीकी चर्चित नायिका श्वेता तिवारी धेरै समयदेखि पर्दाबाट गायब छिन् । उनी आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेकी छिन् । तर पछिल्ला केही समयदेखि श्वेता र उनका श्रीमान्बीच खटपट भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । खबरका अनुसार श्वेता एक
'इन्स्टाग्रामले ह्याकरलाई किन दियो ३२ लाख रुपैयाँ' ?
अहिले साइबर आक्रमण तथा ह्याकिङ विश्वभर नै ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अझ फेसबुकलगायतका कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताका डाटा आफ्नो मुनाफाका लागि तेस्रो पक्षलाई बेच्ने कार्यले गर्दा यो समस्या झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ । साइबर अपराधी �
इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट सेयर गर्दा 'प्रियंकाको कमाइ एक करोड ८६ लाख'
मुम्बई :&nbsp;बलिउडका सेलिब्रिटीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नहुने कुरै भएन । तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सक्रियताले पनि उनीहरू आकर्षक कमाइ गरिरहेका छन् भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसमध्येकी एक पात्र हुन्, प्रियंका चोपडा । बल�
यस्तो बन्यो बाहुबली स्टार प्रभासको ‘साहो’को ट्रेलर'
बाहुबली स्टार प्रभासको बहुप्रतिक्षित फिल्म &lsquo;साहो&rsquo;को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। फिल्म ३० अगष्टमा रिलिज हुनेछ। दुइ मिनेट सड्चालीस सेकेण्डको ट्रेलरबाट फिल्ममा पूर्ण एक्सन, सस्पेन्स र केहि रोमान्स छ भन्ने बुझिन्छ। फिल्ममा प्�
जन्मदिनमा मागेको कार नपाउँदा 'खोलामा कार फाल्ने युवक'
जन्मदिनमा आमाबाबुले कार उपहार दिंदा को खुशी नहोला । तर, हरियाणामा एक युवक भनेको ब्रान्डको कार नकिनिदिएको भन्दै दुःखीमात्र भएनन् कार लगेर नहरमा फालिदिए । हरियाणा राज्यको यमुनानगरका २२ वर्षीय युवकले बीएमडब्लु थ्री सिरिज कार य�
बलिउड नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेजले आज आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । जन्मदिन मनाउन उनी आफ्नै देश श्रीलंका पुगेकी छिन् । उनले आफ्नो जन्मदिन शनिबारबाट नै सेलिब्रेट गरिरहेकी छिन् । शनिबारको दिन श्रीलंकाको समुन्द्री किनारमा पु
मनमा बस्ने यी ३ युवतीहरुलाई 'सलमानले दिएका थिए करोडौं पर्ने कार' (मूल्य सहित)
मायाँ गर्नेलाई धेरै माया गर्ने र घृणा गर्नेलाई धेरै घृणा गर्ने सलमान खानको बानि नै हो। आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिको खेदो खन्न समेत पछि नपर्ने सलमान मनले खाएको व्यक्तिको लागि भने ज्यानै दिन पनि पछि पर्दैनन्। बलि उडमा लामो समय देख�
कंगना रनावतको नयाँ फिल्म 'धाकडको टीजर सार्वजनिक' (भिडियो)
साउन २४, २०७६- बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतको नयाँ फिल्म धाकडको टीजर भिडियो सार्वजनिक भएको छ । टीजर हेर्दा कंगनाले शक्तिशाली एक्सन अवतार देखाएको स्पष्ट हुन्छ । फिल्मको निर्देशन रजनीश राजी घईले गरेका छन् । सोहिल मकलाईले फिल्म न�
सारा खानको कपडालाई लिएर 'पाकिस्तानमा बबाल'
मुम्बई। चर्चित टेलिभिजन अभिनेत्री सारा खान पछिल्लो समय व्यस्त दैनिकीभन्दा पर छिन्। स्टार प्लसको शो &lsquo;बाबुल&rsquo; बाट रातारात हिट भएकी सारा मंगलबार ३० औँ वर्षमा प्रवेश गरेकी छन्। सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने तस्बिरका कारण विवाद�
ब्रम्हास्त्रुको बजेट सय करोडबाट '१५० करोड माथि पुग्यो'
दक्षिण भारतीय सिनेमा बाहुबली सिरिजले भारतको सबैभन्दा ठूलो र संसारको ठूलो मध्येको एक बलिउडलाई हेरेको हेर्यौं बनाइदियो। बलिउडले नआँकेको बजेटमा एसएस राजमौलीले स्वरैकल्पनाको सिनेमा बनाएर चकित पारिदिए। प्रभास रातारात स्टार ब�
काजल अग्रवाललाई भेट्न खोज्दा '६० लाख स्वाहा'
मुम्बई। आफ्ना प्रिय कलाकारप्रति फ्यानको पागलपनको सीमा कतिसम्म हुन्छ, यस्सै एकिन गर्न सकिन्। उनीहरू आफ्ना प्रिय कलाकारका लागि केके गर्छन् गर्छन् बेलाबेलामा थरिथरीका फ्यानहरूका अचम्मका किस्सा सार्वजनिक हुने गर्छन्। फेरि एउ�
चर्चित नायक आर्यन सिग्देलकी पत्नी 'सपनाले छोराको तस्विर गरिन् सार्वजनिक'
काठमाडौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित नायक मध्येका एक हुन्, आर्यन सिग्देल । चक्लेटी हिरोको नामले समेत चिनिएका उनी अभिनित कयौं चलचित्र हिट भएका छन् । निर्माता र निर्देशकको रोजाइमा पर्ने गरेका आर्यन अहिले पनि चलचित्र क्षे�
श्रीमान श्रीमती बन्दै ऋतिक रोसन र दीपिका पादुकोण 'हेर्नुहोस वास्तविकता'
ऋतिकको नँया फिल्ममा ऋतिकले राम र सिताको भुमिका दीपिकाले निभाउने भएकी छन् । अर्थात फिल्ममा उनहिरको श्रीमान र श्रीमतीको भुमिकामा देखिने भएका छन् ।फिल्मको नाम &lsquo;रामायण&rsquo; हुने बताइएको छ। समाचारमा जनायए अनुसार फिल्मको सुटिङ ३ ड�
चर्चामा आएकी नायिका 'सम्राज्ञीको हातमा लाग्यो हतकडी' (भिडियो)
काठमाडौँ। चलचित्र मारुनी&rsquo;को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा पुष्प खड्का र सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको अभिनय रहेको छ । नवल नेपालको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्र भदौ १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । यस ट्रेलरल�
10171 पटक पढिएको
१९ वर्षे किशोरी, '३ हजार ७ सय फिटमा उडेको जहाजबाट जब हाम फालिन्'
लण्डन : गत साता क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी १९ वर्षीया एक विद्यार्थीको मृत्यु भयो । उडेकको केही मिनेटमै उनको मृत्यु रहस्यमय भनिए पनि डरलाग्दो यथार्थ बल्ल बाहिर आएको छ । अलाना कट्ल्याण्डन नाम गरेकी १९ वर्षीया किशोरी परिवारला�
१८ वर्ष नपुग्दै यौन सम्पर्क गरेका यी १० चर्चित कलाकार, 'जस्ले आफ्नो अनुभव खुलेरै सुनाए'
कतिपय बलिउड तथा हलिउड कलाकारहरु यौनको विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् । से क्सको विषयमा उदार कलाकारहरु जसले १८ वर्ष पुग्नु भन्दा अगाडि नै यौ न सम्पर्क गरेको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं । रणबीर कपुर : एक म्यागजिनको अन्तर्�
5119 पटक पढिएको
पुरानो बुलेटको च्यारिटी शो गाेरखा सिनेफ्लेक्समा
धरान । नेपाली कथानक चलचित्र &lsquo;पुरानो बुलेट&rsquo; को गोर्खा कम्प्लेक्स धरानमा शनिबार विहान ९ बजे (भाेली) च्यारिटी शो हुने भएको छ ।केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको २०५५ सालको आइएस्सी ब्याचका विद्यार्थीले आयोजना गरेको च्यारिटी शोबाट �
प्रियंकाको बर्थडे केकको मूल्य '५४ लाख'
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडाको जन्म दिन गत १८ जुलाईमा थियो। ३७ वर्ष पुगेकी प्रियंकाले आफ्नो बर्थडे अमेरिकास्थित मियामीमा परिवार तथा साथीभाइसँग मनाएकी थिईन्। प्रियंकाको बर्थडे सेलिब्रेशनको चर्चा भने निकै लामो समय रह्यो। जन्म
नेपाली मुलकी सुनितासँगको बिबाह बारे 'अभिनेता गोबिन्दाले मुख खोले'
बलिउडमा नेपाली ज्वाईको रुपमा चर्चा पाएका अभिनेता गोबिन्दा यस्ता नायक हुन् जसले बलिउड फिल्ममा आफ्नो अभिनयले फरक छाप छोडेका छन् । लगभग हरेक खालका चलचित्रमा गोबिन्दाले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएका छन् । विशेषगरी ९० को दशकपछि �
सामाजिक सञ्जालमा 'तमिल सुपरस्टार विजयको मृत्यु' !
सामाजिक संजालमा कतिखेर के र को भाइरल बन्छ थाहा हुन्न। सत्य कुरा भाइरल हुँदा त राम्रै हो तर गलत खबर फैलिदा भने सो खबरसँग सम्बन्धितले हैरानी बेहोर्छन्। यस्तै एउटा हल्ला सोमबार फैलियो। र यो हल्लाको सिकार भए तमिल सुपरस्टार विजय। ट�